Ra’iisal Wasaare Khayre oo la Kulmay Kuxigeenka Madaxa Midowga Yurub ,Maxay kawadda hadleen ? – Radio Daljir
Maajo 3, 2018 5:31 b 0
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay Kuxigeenka Madaxa Midowga Yurub ahna Ergey sare Fedetica Mogherini.
Madaxdan ayaa kulankooda uga hadlay xaalada amniga dalka iyo sida Midowga Yurub gacan uga geysan karo qaabka dhismaha Ciidanka Soomaaliyeed ee la qorshaynayo in amniga dalka ugala wareegaan Ciidanka AMISOM.
Kulankooda ayay diirada ku saareen arrimaha Siyaasadda,dib u habeynta iyo qaab dhismeedka amniga,hannaanka doorashada Soomaaliya ee 2020-ka.
Midowga Yurub ayaa ah taageeraha ugu weyn ee howlgalka Midowga afrika ee Soomaaliya ,waxaana uu sanadkii ku bixiyaa mallaayiin dollar.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa maanta kaga qeybgalay xarunta Midowga Yurub ee Brussels shir looga hadlayay amniga iyo qorshaha kala guurka AMISOM oo la filayo in ciidanka Soomaaliyeed amniga dalka ula wareegi lahaayeen.